Ivon-toerana Fianarana Frances Pew Hayes »Hodges University
Sokajy: Fiainana Mandrakizay
Tsy miala sasatra mihitsy ny fianarana
Vondrom-piarahamonina Frances Pew Hayes hianarana mandritra ny androm-piainany
Fandaharana natao ho an'ny mponinao ao an-tsaina
Ny oniversite Hodges dia mino ny lanja sy ny tombony azo amin'ny fizotran'ny fianarana mandritra ny androm-piainana. Mifanaraka amin'ny iraka nampanaovina anay dia nanamboatra programa fampiroboroboana ireo mponinao izahay izay misy lohahevitra toy ny zava-kanto sy ny kolontsaina, ny olana ankehitriny sy ny dia, ny siansa sy ny tontolo iainana, ny teknolojia mampifanaraka, ary ny fahasalamana sy fahasalamana.
Amin'ny fiaraha-miasa dia afaka mamorona programa namboarina ho an'ireo mponinao izay mitazona azy ireo hiasa sy hiasa hatrany.
Na dia mino aza izahay fa mahasoa ny mponina ny fandaharanay, manome fiadanan-tsaina ihany koa izy ireo rehefa misafidy ny toerana misy anao satria ny fandraisana anjara dia aseho ho zava-dehibe rehefa mifidy vondron'olona antitra. Antsoy izahay anio raha hijery ny fomba ahafahanay manampy anao.
Manao ny drafitra izahay. Ankafizin'ny mponinao ireo fandaharana. Ary faly ianao amin'ny vokatra tsara.
Mifandraisa solontena iray maharitra mianatra
Fianarana mandritra ny androm-piainana. Tombontsoa tsy manam-petra.
Fanadihadiana marobe no mampiseho fa ny fianarana mandritra ny fiainana dia manome tombony tsy manam-paharoa. Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia manaiky izahay! Manolotra programa atolotry ny manam-pahaizana mahay, manana mari-pahaizana, manana fahazoan-dàlana, na manana traikefa voaporofo hizara ny fahalalany.
Mampiroborobo ny hetsika ara-pahasalamana mahasalama
Helps amintsika hampiasa fahalalana amin'ny fomba misy heviny
Imanatsara ny fahaiza-misaina sy ny famahana olana
Manamora ny fianarana mitohy satria tsy mila fahalalana mijanona intsony ny asa
HElps ny tenany hanangana fisotroan-dronono ary hianatra fomba vaovao haharetan'izany
Mety hampiroborobo ny fahasalamana sy ny fahasalamana amin'ny:
Imampitombo ny haavon'ny angovo
Dmihombo ny tosidra
Rmanatsara ny haavon'ny famoizam-po
Lmiatrika ny aretim-po & tapaka lalan-dra
Manatsara ny tena-fahatokiana
Ireo mianatra mandritra ny androm-piainana dia sambatra kokoa ary velona lava kokoa!
Lohahevitra momba ny programa
The Arts (Theatre & Mozika)
Zavakanto, asa tanana & sary
Olana ankehitriny, (eo an-toerana, nasionaly, manerantany)
Fahasalamana, fahasalamana sy fahasalamana
Fiarovana ny aina
Fikarohana eo an-toerana
Fitomboan'ny tena manokana
Siansa sy tontolo iainana